Hoobiyayaal iyo qarax ay ku dhinteen dad rayid ah. - BBC Somali
Hoobiyayaal iyo qarax ay ku dhinteen dad rayid ah.
26 Maarso 2012
Image caption Ciidamada nabad ilaalinta ee Muqdisho
Ugu yaraan 2 caruur ah ayaa ku geeriyooday siddeed kalana waa ay ku dhaawacmeen, weerar hoobiyayaal ah oo xalay lagu riday xero ay ku jiraan dad ka soo barakacay deegaanadoodii xeradii hore ee daraawiishta oo u dhaw xarunta baarlamaanka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho.
Hoobiyayaasha ayaa waxa sheegtay Alshabab oo sheegay in ay ku weerareen xarunta madaxtooyada, hase ahaatee sarkaal u hadlay dowladda ayaa sheegay in aaney jirin wax hoobiye ah oo ku dhacay xarunta madaxtooyada weerarkana uu ahaa mid waxashnimo ah oo lagu dhibaateyno dadka rayidka ah.
Dhacda kale qarax lala eegtay ciidamo kuwa dowladda KMG ah ayaa waxa ku dhintay hal askari.
Waa weerarkii labaad ee noociisa ah tan iyo markii Alshabaab laga saaray caasimadda. Muddooyinka madaxda dowladda ayaa waxaa ay wadeen dadaallo lagu xoojinayo amniga degmooyinka gobolka Banaadir waxaana wadooyinka qaar laga bilaabay ilaalinta joogta ah.